America Yochema Amai Barbara Bush Vaive Mudzimai weMutungamiri weNyika Iyi
VaGeorge W. Bush (R) VaGeorge Bush naAmai Barbara Bush
Amai Barbara Bush, mudzimai wevaive mutungamiri wenyika yeAmerica uyezve vari amai wemumwe akaimboitawo mutungamiri wenyika yeAmerica vashaya mushure mekurwara kwenguca yakareba.
Amai Bush vaive mudzimai waVaGeorge H. W Bush, uye mumwe mwanakomana wavo George Walker Bush akambotungamirawo nyika yeAmerica,. Vashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa.
Mutauriri wemhuri yaVaBush, VaJim McGrath ndivo vakaburitsa mashoko ekushaya kwaAmai Barbara Bush.
Amai Bush vanonzi vairwara nechirwere chemoyo uye vainge votadza kufema zvakanaka. Vainge vari mudzimai wemutungamiri wenyika kubva muna 1989 kusvika muna 1993.
Mutungamiri wenyika yeAmerica VaDonald Trump vatumira mashoko padandemutande retwitter vachiti Amai Bush munhu aikurudzira kukosha kwemhuri.
Amai Barbara Bush
Vaive mutungamiri wenyika yeAmerica VaBill Clinton nemudzimai wavo Amai Hillary Clinton vakatiwo Amai Bush vaive mudzimai aida nyika yake uye mhuri yake uye aive nenjere dzakapinza. VaBarack Obama vaivewo mutungamiri wenyika yeAmerica nemudzimai wavo Amai Michelle Obama vatumirawo mashoko enyaradzo.
Asi vakambotiwo semudzimai wemutungamiri wenyika vaisapindira nyaya dzezvematongerwo enyika.
Mumwe mwana wavo Jeb Bush akamboita gavhuna wedunhu reFlorida uye akambokwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2016 akakundwa naVaTrump musarudzo dzebato remaRepublicans. Mufi aizivikanwa nekutaura chokwadi nguva dzose.
Munhoroondo yeAmerica ndivo mudzimai wechipiri kuita mudzimai wemutungamiri wenyika uye kuve nemwana akatungamirawo nyika. Mudzimai wekutanga kuita izvi ndiAmai Abigal Adams, mudzimai waVaJohn Adams mutungamiri wechipiri weAmerica uye vari amai VaJohn Quincy Adams, mutungamiri weAmerica wechitanhatu.
Amai Bush vakaroorana naVaBush musi wa 6 Ndira 1945 uye vainge vaine vana vatanhatu. Muna 2016 Amai Bush vakambotsvagirawo mwana wavo Jeb Bush rutsigiro musarudzo dzemutungamiri wenyika.
Pavainge vari mudzimai wemutungamiri wenyika vaikoshesa zvikuru chirongwa chekukurudzira kuti vanhu vaverenge mabhuku. Vakaumba sangano reBarbara Bush Foundation for Family Literacy rekukurudzira mhuri kuti dziverenge.
Muna 1989 apo vanhu vakawanda vaitya kana kubata ruoko rwemunhu ane chirwere chemukondombera cheHIV, Amai Bush vakambundikira mumwe mwana ainge aine chirwere ichi vakaudza vanhu kuti vairarama nechirwere ichi vaidawo kubatwa sevanhu nekuremekedzwa.
Amai Barbara Pierce Bush vakaberekwa musi wa 8 Chikumi kuRye, muNew York. Baba vavo vaitsikisa mabhuku kukambani yeMcCall’s and Redbook magazines.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr Chipo Dendere vanoti pasi rose rarasikirwa nemunhu airwira kodzero dzemadzimai.